> Resource > Android > 5 Waxyaabaha la Sameeyo la Your New Android Phone
Si aad u hesho telefoonka dhaldhalaalaan cusub Android, sida Samsung Note 4, oo aad rabto si ay u muujiyaan off saaxiibadaa hadda. Sug ilbiriqsi. Waxaa tahay 5 wax la sameeyo marka aad u hesho telefoonka cusub Android, sida calan kor u network iyo habayn, rakibi barnaamijyadooda dilaaga, xogta monitor oo dheeraad ah. Marka aad dhammeysato diyaar, aad sameyn kartid waxa aad rabto.
1. Guddi Your Android Phone
Marka aad telefoon cusub Android, ugu horreeya oo dhan, oo aad u firfircoon kartaan. Iska saar qolof ah ee telefoonka aad Android, iyo geliso SIM ah. Markaas, shid telefoonka aad Android oo raac alaabtii on-screen in ay doortaan afka ah, macluumaadka ku qeexan iyo waqtiga, dooran Wi-Fi, eedeeyay network dhigay iyo in ka badan. Marka waxaad ku dhammaysaa, aad telefoonka Android noqon doonaa firfircoon.
2. Xafido Your Android Phone
Waxa ku xiga ee aad samayn kartaa telefoonka aad Android waa in la dhiso habayn ah telefoonka aad Android, si loo xaqiijiyo ammaanka xog muhiim ah aad. Habayn kala duwan ee noocyada. Waxaad isticmaali kartaa habka, PIN, password, Kaadhkaaga, faraha iyo in ka badan. Si aad u qotomiyey, kaliya ka jaftaa Settings telefoonka aad Android. Hoos si aad u hesho Lock Screen > Screen qufulka . Markaas, dooro habka aad doonayso in aad xirtid telefoonka aad Android inay sii xogta aad ammaan iyo xaqiijistay.
3. nidaameed Google, Exchange ActiveSync iyo Xisaabaadka dheeraad ah
Haddii aad leedahay xiriir abid synced iyo kalandar si Google, Exchange ActiveSync, iyo wax kasta oo xisaab kale, aad caqli iyo macquul ah. Hadda, aad ku sawirnaa Settings > Accounts > dar xisaabta inay la soo wareegto in xisaabaadka sida aad xiriir telefoon oo u hagaagsan Android iyo jadwal si ay telefoonka aad Android.
4. Ku rakib Killer Apps
Sida aad ogtahay, soosaarka iyo side aad bixisaa qaar laga daadiyo pre-rakibay inuu la kulmo isticmaalka maalin kasta, sida garaac, play qof music iyo video, cid dir oo soo helaan farriimaha. Si kastaba ha ahaatee, waa ka fog ku filan. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda pre-rakibay laga yaabaa in aan sidoo kale aad jeceshahay shaqeeyaan. Haddii ay sidaa tahay, waxaad tahay qof in ay tagaan awood Google Play si aad u hesho qaar ka mid ah barnaamijyadooda Killer, sida adda barnaamijyadooda, barnaamijyadooda sahamisa file, Facebook app Rasuul.
Isticmaalka 5. Monitor Data
Waxaa lagama maarmaan ah inay ku qiyaasto isticmaalka xogta aad, haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa inaad u xun. Isticmaal xad dhaaf ka dhigan tahay lacagta da'da weyn u weyn. Si aad u fogaado, inaad si fiican u rakibi lahaa qaar ka mid ah monitor xogta barnaamijyadooda telefoonka aad Android. Noocan ah app caawimo si ay ula socdaan isticmaalka xogta aad si sax ah, loola socdo waxa Chine oo isticmaalaya xogta ugu badan si loo hubiyo in aadan u gudbo xadka xogta aad bil kasta oo la kulmeyso eedeeyay aan loo baahnayn.
Waxa kale oo caadi ah, haddii aadan rabin in loo soo dajiyo monitor xog kasta. Phone Your Android uu leeyahay feature ah isticmaalka xogta dhisay-in. Tag Settings > isticmaalka xogta . Waxaad sameyn kartaa xadka xogta iyo marka aad hesho digniin. Waxa kale oo aad ugu arki kartaa xogta oo app isticmaalo.